Afaka mamerina ny fizahantany miboridana ve i Kroasia?
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Afaka mamerina ny fizahantany miboridana ve i Kroasia?
Jolay 20, 2019
Ny morontsiraka Adriatika idiran'ny Kroasia dia mpisava lalana voalohany amin'ny fitoraham-bolo. Manondro ny tantarany olona miboridana milomano sy mankafy ny tontolo voajanahary amin'ny faritra.
Koversada, naturista miitatra - teny iray hafa ilazana ny nudist - complex dia miorina eo amin'ny nosy iray miala ny saikinosy Istria avaratrandrefan'i Kroasia. Tokotokony ho 250 hektara ny haben'ny tobin'ny ala kesika ary matetika ny vahiny mandehandeha mitanjaka, milomano ary miakanjo masoandro, milalao fanatanjahan-tena mitanjaka, ary mitaingina bisikileta mitanjaka. Izy ireo kosa dia asaina miakanjo rehefa misakafo any amin'ny trano fisakafoanana na any amin'ny fivarotana.
Misy vahiny eo amin'ny 5,000 1980 eo ho eo amin'ny fotoana rehetra, mijanona ao amin'ny trano, van fitobiana ary tranolay. Toa be dia be, fa tamin'ny 15,000 tany ho any raha niboridana no natao, mahazatra ny vahiny XNUMX ny namandrika tao amin'ilay toerana.
Miroborobo izao ny fizahan-tany any Kroasia, ary i Koversada, izay mahasarika mpizahatany maherin'ny 40 taona mahery, dia te-hisarika mpizahatany ho any amin'ny toeram-pivarotany, fa raha ny filazan'ny mpitantana ny toby iray dia tsy dia liana amin'ny fitiavam-bolan'ny tanora tahaka ny toa ny ray aman-drenin'izy ireo. . Sa izy ireo?
Tamin'ny taon-dasa, mpizahatany efa ho 19 tapitrisa no nitsidika an'i Kroasia, izay nankany amin'ny morontsirak'i Adriatika mamiratra. Ny tombana dia manondro fa manodidina ny 300,000 amin'izy ireo no nudist - ny ankamaroan'ny Alemanina, Slovenes, Aostraliana ary Holandey. Saingy farafaharatsiny 10 isan-jaton'ny mpizahatany rehetra toa mahita fomba na toerana hilomano mitanjaka - izany dia mpizahatany miboridana 1.9 tapitrisa isan-taona. Toa misy tsena eto.
Ny ora nahatongavan'izy ireo: Hiseho ny volan'ny vahoaka ao amin'ny Times Square & London Piccadilly rahampitso
Manidy ny fizahantany ny Nosy Komodo